कोठीको गोप्य रहस्यः शरीरको कुन अङ्गमा कोठी हुँदा के हुन्छ ? – Complete Nepali News Portal
नमस्कार, सबैमा सधै जसो यसपटक पनि तपाइको सेवामा हामी ज्योतिष, वास्तु र ग्रहगोचर सम्बन्धि समाग्री लिएर उपस्थित भैसकेका छौँ । आशा छ यस पटकको सामग्री पनि तपाइलाइ अवश्यनै मन पर्ने ने छ ।
आउनुहोस् कस्तो हस्तरेखा हुने व्यक्ति धनी बन्छन त ? भन्ने विषयको सामग्री शुरू गर्नु भन्दा पहिला यो मन्त्र उच्चारण गरौँ ः
ॐ भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं। भर्गोदेवस्य धीमहि। धियो यो न: प्रचोदयात्।
प्राय मानिसको शरीरको कुनै न कुनै भागमा कोठी हुने गर्दछ । कोठीलाई चिकित्सकीय भाषामा छालासम्बन्धी समस्याको रुपमा हेरिए पनि धर्मशास्त्रहरुले भने यसको विशेष अर्थ रहने विश्वास गरिन्छ । शरीरमा भएका कोठीहरुले मानिसको भाग्यको संकेत गर्ने विश्वास लिइन्छ । आउनुस, आज हामी शरीरको कुन अंगमा कोठी भए कस्तो फल पाईन्छ भन्ने जानकारी दिँदैछौं ।